Muhiimadda suuqa sarifka lacagaha qalaad | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Muhiimadda suuqa sarifka lacagaha qalaad
Jose recio | | Siyaasadda lacagta
Haddii ay jirto hanti maaliyadeed oo ahmiyad gaar ah u leh dhaqaalaha, waa suuqa sarifka lacagaha qalaad. Weligaa ma maqashay taas oo xitaa waxaa laga yaabaa inay kuugu adeegtay inaad ka dhigto howlahaaga dhaqaale mid faa'iido leh. Sanado badan waxay noqotay bar tixraac go'aamiso xiriirka ganacsi, maahan oo keliya dhammaan waddamada meeraha, laakiin sidoo kale dadka dhexdiisa. Sababtaas awgeed aad ayey muhiim u tahay inaad aqoon buuxda u leedahay waxa loola jeedo xiriirka dhaqaale.
Haddii aan ka hadlayno suuqa lacagta, waxaan daruuri u nahay tixgelinta Forex. Waa soo gaabinta erayga Ingiriisiga Dibadda Sarrifka oo wuxuu noqonayaa mid ka mid ah suuqyada ugu firfircoon adduunka oo lagu gartaa in si adag loo baahin karo. Hagaag, noocyada kala duwan ee lacagaha qalaad ama lacagaha caalamiga ah ayaa lagu dhex ganacsadaa. Kaliya ma ahan kuwa ugu caansan, sida euro, US dollar, Swiss franc ama British pound, oo ka mid ah kuwa ugu khuseeya. Laakiin kuwa kale oo ka socda aag dhaqaale oo caalami ah.
Iyadoo loo marayo suuqan dhaqaale ee gaarka ah, lacagaha way ganacsadaan saacadaha oo dhan waxayna marayaan dhammaan isbeddelada taxanaha ah ee qiimeyntooda. Dhaqdhaqaaqyadan waxaa isticmaala maalgashadayaasha si ay isugu dayaan inay faa'iido uga dhigaan raasamaalkooda la heli karo. La yaab maahan, waa mid ka mid ah suuqyada ugu firfircoon adduunka maxaa yeelay waxaa lagu maalgelin karaa ku dhowaad lacag kasta oo adduunka ka jirta. Halka ay isbeddellada sare ee qiimahoodu yahay mid ka mid ah astaamahooda guud ee guud. Ilaa heer aad furi karto oo xiri karto boosaska kalfadhi keliya suuqyada sinnaanta. Iyada oo faraq ballaaran uu u dhaxeeyo waxtarka iyo naafanimada aad hadda ka dib heli karto.
1 Lacagta: socodka lacagta
2 Ka ganacsiga lacagaha qalaad
3 Maxay yihiin suuqyadan?
4 In ka badan hawlgallada beddel
5 Shaqooyinka suuqa Forex
6 Imaatinka cryptocurrencies
Lacagta: socodka lacagta
Dabcan, muuqaalkeedu waxaa sabab u ah sabab aad u cayiman taasna waxay xiriir la leedahay waxa xiriirka dhaqaale uu yahay. Dareenkan, ma iloobi kartid in suuqani ku dhashay ujeedo aad u cad oo aan cid kale ahayn in la fududeeyo qulqulka ka imanaya ganacsiga caalamiga ah. Wax walba waxaa lagu iibsadaa laguna iibiyaa qaab lacag ah, wax kastoo ay ahaan jireen. Ilaa iyo inta ay tahay waxa qiimaha siinaya hawlgallada laga fulinayo meeraha oo dhan. Iyadoo xiriir toos ah laga helayo waa maxay qiimaha lacagta. Layaab ma ahan, siyaasadaha lacageed waxay ku saleysan yihiin natiijooyinka ay bixiyaan suuqyada lacagta.
Dhanka kale, ma iloobi kartid in sarifka lacagaha qalaad uu yahay aaladda lagu qaabeeyo siyaasada dhaqaale ee wadan. Ka baxsan qiimeynta kale ee muhiimka ah ee dhaqaalaha. Halka qayb wanaagsan oo ka mid ah hawlgallada caalamiga lagu fuliyo lacago aad u gaar ah. Tusaale ahaan, kiiska gaarka ah ee euro iyo dollar ka yimid Mareykanka. Sababtaas awgeed, isbeddelada ka dhaca suuqyada ay ku taxan yihiin aad ayey muhiim u yihiin. Ilaa heer ay ka soo saari karaan duufaan dhaqaale oo weyn, sidii dhacday sannadihii u dambeeyay. Ama xitaa sababi gaar ahaan hoos u dhac dhaqaale.
Ka ganacsiga lacagaha qalaad
Tani waa muhiimadda ay leedahay hantidan maaliyadeed ee muhiimka ah in ay gabi ahaanba lama huraan tahay in la qabto waxqabad ganacsi oo kasta. Ilaa heer in sida ay Bangiga Dejinta Caalamiga ah, Natiijooyinka hordhaca ah ee caalamiga ah ee ka soo baxay 2016-kii Seddexdii Sano ee Bangiga Shisheeye ee Dibadda iyo Sahaminta Daraasadaha ayaa muujinaya in ka ganacsiga suuqyada sarifka lacagaha qalaad celcelis ahaan ku dhowaad US $ XNUMX trillion xilligan. Tiradani waa shay muujinaya iftiiminta lacagaha ay soo saaraan raasamaalku adduunka oo dhan.
Nidaamkan si uu si sax ah u horumariyo, lacagaha waa in la nidaamiyaa si loo ogaado qiimahooda. Dareenkan, waa suuqyada maaliyadeed ee jimicsiga sameeya dhexdhexaadiyayaal waxay kuxirantahay sharciga saadka iyo baahida daqiiqad kasta oo cayiman. Kala duwanaansho joogto ah oo ku saabsan sheegashada qiimahooda iyo iyaga, maalgashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ayaa ka faa'iideysan kara mid kasta oo ka mid ah howlahooda suuqyadan gaarka ah.
Maxay yihiin suuqyadan?
Suuqyada maaliyadeed ee hantidan lagu taxay waxay aad ula mid yihiin kuwa maalgashiyada kale. Tusaale ahaan, iibsashada iyo iibinta saamiyada boorso ku jirta. Laakiin nuun yar oo ay tahay inaad tixgeliso wixii hadda ka dambeeya. Ma aha wax kale oo aan ahayn kala duwanaanshuhu waa joogto, kaas oo kaa caawin kara inaad fuliso howlahaaga ganacsi. Waxaad ku kasban kartaa lacag badan dhaqdhaqaaqyadan astaamaha ah, laakiin isla sababtaa awgeed, uga tag euro badan. Marnaba waa inaadan iloobin halista kujirta howlahaaga. Ka saraysa fasalo maalgashi oo kale.
Marka laga hadlayo xaaladdan guud, waxaa aad muhiim u ah inaad ogtahay inay muhiimad weyn leedahay in la hagaajiyo qiimaha wax iibsiga iyo iibka lacagaha. Sababaha kale maxaa yeelay waxay ku saabsan tahay hawlgallo aad u adag. Astaamaha kale ee ugu habboon ee suuqan maaliyadeed waa joogitaanka isbeddelkiisa sare, taas oo caqabad ku ah ku shaqeynta xasilloonida weyn ee soo-jeedimahan maalgashiga. Dhinaca kale, waa maalgashi lagu taliyay in lagu jiro waqti aad u gaaban. Xitaa saacado gudahood waad ku buuxin kartaa baahiyahaaga maalgashi ee hantidan gaarka ah ee dhaqaale.
In ka badan hawlgallada beddel
Lacagta, dhinaca kale, way ka baxsan tahay waxa lagu arko suuqyada maalgashiga. Sababtoo ah saameyn ahaan, haddii ay ku sifoobaan wax, waa sababta oo ah haddii aysan run ahaantii jirin suuq sarrifka lacagaha qalaad, macaamillada caalamiga ahi waxay la mid noqon doonaan wax kala iibsiga fudud oo halkaasna waxaa ka madax bannaannaan lahaa qiimaha gudaha ee wadan ixtiraamka caalamiga ah. Dabcan tani waxay ku dareysaa muhiimad weyn saameynta ay ku leeyihiin falalkooda. In kasta oo ay run tahay in yar oo keliya ayaa ah kuwa xoogga saara inta badan hawlgallada laga fuliyo waddamada adduunka.
Marka la eego, doorka ugu muhiimsan wuxuu u dhigmaa lacagta Mareykanka. Ilaa dhowaan waxay kali ku noqotay inta badan ganacsiga iyo macaamil ganacsi. Ilaa lacagta guud ee yurubiyanka, euro, iyo shaqooyinkan waxaa loo qaybiyey ku dhowaad sinnaan xagga qaraabada ah. Tani waa mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee ay suuqyada sarrifku u yihiin halyeeyo qayb weyn oo ka mid ah hawlgallada ay fuliyeen maalgashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah. Si aan micno lahayn, qayb wanaagsan oo ka mid ah wakiillada maaliyadeed ayaa sugaya mid kasta oo ka mid ah daqiiqadaha isbeddelladooda qiimaha.
Shaqooyinka suuqa Forex
Muuqaal kale oo in la caddeeyo xilligan waa doorka noocan ah suuqyada maaliyadeed. Hagaag, howlaheeda si aad u wanaagsan ayaa loo qeexay waana lagama maarmaan inaad iskudarsato fikradan wixii hada ka dambeeya. Sababtoo ah runtii, Isaga Suuqa suuqa waxay fulisaa laba hawlood oo waaweyn oo hawlgalkeeda ah. Midkood ayaa degan inuu u beddelo lacagta waddan mid ka mid ah lacagta waddan kale. Fikradan waxaa si fudud loogu fahmi karaa istiraatiijiyad kasta oo monetarist ah. Laakiin dhinaca kale, tan labaad ee shaqooyinkeeda waxay ku saleysan tahay bixinta wax yar oo nabadgelyo ah oo ka dhan ah halista sarrifka ee noocan oo kale ah hawlgallada gaarka ah ay ku lug leeyihiin. Qaab ahaan waxay u soo saartaa nooc ka mid ah ilaalinta dhaqdhaqaaqa lagu horumariyo suuqyada maaliyadeed ee astaamahan.
Sababtoo ah sidaad ogtahayba, halista dhaqdhaqaaqyadani way ka sarreeyaan hantida kale ee maaliyadeed ee aad kula qabsan jirtay inaad maalin walba ku shaqeyso. Iyo inaad qaar dalbato talaabooyinka amniga sare si loo ilaaliyo dhammaan jagooyinkaaga. Ilaa heer aan maal-gashadeyaasha oo dhami awood u lahayn inay ku shaqeeyaan qalabkan maalgashi. Haddii aadan haysan dhaqan dhaqaale oo kugu filan oo aad ku shaqeysid, waxaa fiicnaan doonta inaad ka gaabsato oo aad u hagto hantidaada shaqsiyeed dabaqad kale oo hanti maaliyadeed ah oo ka murugsan qaab dhismeedkooda iyo makaanik ahaan suuqyada maaliyadeed.
Mid ka mid ah dhacdooyinka ugu habboon bilihii la soo dhaafay ayaa ahaa soo degitaanka lacagaha dalwaddii. Laakiin aad uga taxaddar hawlgalladooda maxaa yeelay dhammaadka maalinta isku mid ma aha xitaa haddii loo qoondeeyey qadaadiic ahaan. Waa wax gebi ahaanba ka duwan oo aan shaqo ku lahayn mawduuca aan ka hadlayno. Laakiin taa lidkeeda, waxay u sii baxdaa waxa si cad u beddeli kara iyo gaar ahaan maalgashi khatar ah. Saameynta ka soo baxday howlaheeda, sida aad ku arki karto maalmahan.
Lacagtani dal-ku-galka ah ayaa dib loo qiimeyn karaa sida ugu dhakhsaha badan ee ugu dhow 100% marka loo eego maalinta ku xigta ee ay kaga tagi doonaan suuqyada boqolkiiba la mid ah ama xitaa xoog badan. Iyada oo ay jirto khatar muuqata oo ah in aan kaaga tago suuqyada qayb aad muhiim ugu ah keydka maalgashiga. Marka laga eego xaaladdan, lacagaha dalbanka lama barbar dhigi karo, tusaale ahaan, Swiss franc, British pound ama isla Japanese yen. Waa hanti dhaqaale oo gabi ahaanba ka duwan. Tani waa wax ay tahay inaad xisaabta ku darsato hadda si aad u saxdo dhaqdhaqaaq kasta oo la yaab leh oo ku jira koontadaada hubinta. Waa wax maalgashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee adduunka oo dhan ay ku eedeynayaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Siyaasadda dhaqaalaha » Siyaasadda lacagta » Muhiimadda suuqa sarifka lacagaha qalaad
Foomka 037, maxaa dukumintigan loogu talagalay?